Mikraofinansa: « Tsy misy ifandraisany ny Otiv Tana sy ny Otiv Boeny » | NewsMada
Mikraofinansa: « Tsy misy ifandraisany ny Otiv Tana sy ny Otiv Boeny »
Misedra olana ny sampandraharaha madinika momba ny vola, Otiv Boeny, ankehitriny, toy ny tsy famerenan’ny mpanjifany ny vola nindraminy sy ny fitakian’ireo mpikambana hafa ny volany, notahirizina ao aminy. Etsy ankilany, manamarika ny talen’ny fampiroboroboana ny asa ao amin’ny tambajotra Otiv Tana, Andrianomenjanahary Andrianjaka, fa « tsy misy ifandraisany velively amin’ny Otiv Tana ny Otiv Boeny. Samy mahaleo tena tanteraka amin’ny lafiny fitantanana sy ny lafiny vola ny roa tonta. Mitovitovy ny famantarana (logo) ka mety ho izay no ampifangaroan’ny sasany azy roa ireo, nefa samy hafa tanteraka ».
Miasa any Boeny ny Otiv Tana
Notsipihiny anefa fa miasa any amin’ny faritra 10 eto Madagasikara ny Otiv Tana ary anisany ny any amin’ny faritra Boeny. Manodidina ny 3 hetsy ny mpikambana ao amin’ny Otiv Tana, ary tsy nisy mihitsy ny olana hatramin’izay niorenany izay.
Ankoatra izany, atao any Mahajanga, amin’izao fotoana izao, ny hetsika “Loabary an-dasy ho an’ny mpandraharaha”, karakarain’ny Otiv Tana, entina hampiroborobona ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharahana any an-toerana.